WAAN HAYAA DAWADII. W/Q: Xamse Cumar Kujoog | Gacanlibaaxnews
January 23, 2018 - Written by C M
Anigoo hordhacaas ka dhinbiil qaadanaya, ogaalkana ku haya in aynu nahay ummad muslin ah oo dhaqan iyo tusaalaba diintooda ka qaata, Qur’aanka kariimka ah iyo sunnada Nabiguna SCW ay inoo yihiin ilaha ugu mudan ee aynu wax ka qaadanno, waxa hubaal ah kol kasta oo siaad ah aad ugu fiirfiirsato Qur’aanka iyo Sunnaha Nabiga Scwin aad ka helayso xalka iyo dawada dhibaatooyin iyo xanuunno badan oo ina haysta.
Ubaya bin Kacab oo ka mid ahaa asxaabtii Nabiga Scw ayaa maalin maalmaha ka mid ah Nabiga Scw ku yidhi “Rasuulkii Ilaahayoow, marka aan Ilaahay xusayo ama ducaysanayo, intee in le’eg ayaan kugu salliyaa? (intee ayaa salliga Nabiga Scw ku celceliyaa), Nabigu Scw waxa uu ugu jawaabay “Inta aad doonto” kolkaa ayuu Ubaya ku celiyay “Rasuulkii Ilaahayoow ka warran haddii aan salligaaga ka dhigo affar meeloodoow meel” waxa uu Suubbanuhu Scw ugu jawaabay “haddii aad doonto, inaad ka badisaana adiga ayay kuu khayr badan tahay” kolkaas ayuu Ubaya yidhi “Ka warran haddii aan kala badh xuskayga ama ducadayda ka dhigo Salligaaga” Nabigu sidii si le’eg ayuu u sheegay in ay wanaagsan tahay, haddii uu kasii badinaya ay kasii wanaagsan tahay. Intaas kaddib ayuu Ubaya yidhi “Rasuulkii Ilaahayoow, ka warran haddii aan xuska iyo ducadayda oo dhan aan ka dhigo Salligaaga” kolkaas ayuu Nabigu Scw ku yidhi “Haddii aad sidaa samayso werwerka oo dhan ayaalagaa dul qaadayaa, danbigaagana waa la dhaafayaa”.
Qofku waxa uu noqonayaa qof fuliyay amarkii Ilaahay ee ahaa in Nabiga Scw lagu salliyo sida ku cad aayadda 56 ee Suuradda Axsaab.
Qofku markasta oo uu Nabiga Scw ku Salliyo isagana Ilaahay ayaa toban jeer ku Salliyaya, Salliga Ilaahay addoomihiisa ku salliyaana waa danbi dhaaf.
In Salliga qofku Nabiga Scw ku salliyaa uu gaadhayo Nabiga Scw, sida ku cad xadiiska saxeexa ah ee uu warinayo Abuu hurayra ee sheegaya inuu Suubbanuhu yidhi Scw “Haka dhigina guryihiinna qubuur, qabrigaygana haka dhigina meel lagu ciido, Igu salliya, salligiinnu waa uu isoo gaadhayaa meel aad joogtaanba”.
Salliga Nabigu Scw waxa uu ka mid yahay calaamadaha deeqsinnimada, Nabiguna Scw waxa uu bakhayl dhabcaal ah ku tilmaamay qofka agtiisa lagu xuso Nabiga Scw ee ku salliyi waaya.
Salliga Nabigu Scw waxa uu ka mid yahay calaamadaha Iimaanka ee qofka muslimka ah sida ku cad xadiiska uu warinayo Anas bin Maalik, waxa uu Nabigu Scw yidhi “Midkiin Iimaan dhammaystiran laga heli maayo jeer oo uu iga jeclaado waalidkii, ubadkiisa iyo dadka oo dhan” jacaylka Nabigana Scw waxa ka mid ah in aad xuskiisa badiso.
Qofka badiya Salliga Nabiga Scw waxa uu ka mid noqonayaa maalinta qiyaame dadka ugu dhow Nabiga Scw sida uu Nabigu Scw ku sheegay xadiiska Cabdilaahi bin Mascuud.
Salliga Nabiga Scw waxa lagu helaa in danbiga lagaaga dhaafo, ajar badan oo buuro le’egna laguugu qoro sida ku xusan xadiiska uu Anas bin Maalik ka warinayo Nabiga Scw.
Salliga Nabigu Scw waxa uu sabab u yahay in ducada lagaa aqbalo, waxa ka sugan Nabiga Scw in maalin maalmaha ka mid ah uu arkay nin ducaysanaya oo aan ducadiisa ku bilaabin mahad naqqa Rabbi iyo Salliga Nabiga Scw, kolkaas ayuu Nabigu Scw yidhi “Kaasi wuu degdegay, midkiin marka uu ducaysanayo haku bilaabo ducada mahad naqqa Ilaahay, kaddibna Salliga Nabiga Scw, kaddibna waxa uu doono haku ducaysto”.
Salliga Nabigu Scw waa mid ka mid ah calaamadaha sheegaya in qofku uu ixtiraam iyo waynayn u hayo Nabi Muxammad Scw.
Ugu danbayn waxa uu salliga Nabigu Scw sabab u yahay in maalinta qiyaame –maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay, maalinta wiil iyo waalidkii kala roorayaan, maalinta cadceeddu nin joogii iman doonto- inuu Nabi Muxammad Scw kuu shafeeco qaado.